पुनर्निर्माणमा भारतको पनि किस्ताबन्दी– १ खर्बमध्ये २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको भारतले बल्ल दियो २ अर्ब
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले अर्थ सचिव डा राजन खनाललाई २ अर्ब १० करोड ४३ लाखको चेक हस्तान्तरण
| 2018-07-28 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । भूकम्प लगत्तै नेपालभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् वैठक राखेर गोरखा भूकम्पले आहत नेपाललाई तत्काल उद्धार, राहत र सहयोगको घोषणा गरेको दिल्लीले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनेको अनुदान रकम दिन त्यस्तो तदारुकता देखाएको थिएन ।
किस्ताबन्दीमा दिँदै आएको भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बोलेको अनुदान रकममध्येको पहिलो किस्ता बल्ल हस्तान्तरण गरेको छ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले अर्थ सचिव डा राजन खनाललाई २ अर्ब १० करोड ४३ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेपछि भारतले सहयोग गरेको अनुभूति भयो ।
भूकम्प लगत्तै नेपालले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा १ खर्ब रुपियाँ बरबरको सहयोगको घोषणा गरेको भारतले अनुदान दिन झन्डै ४ वर्ष लगाएको हो ।
०७२ फागुन ८ गते नेपाल र भारत सरकारबीच नुवाकोट र गोरखा जिल्लाका ५० हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले १० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने सहमति जनाएको थियो।
बोलेको २५, दियो २ अर्ब !
भारतले दिने भनेको रकमलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २५ अर्ब अनुदानमध्ये पहिलो किस्तामा ४ अर्ब उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
पशुपतिनाथ सहित अन्य पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा चासो देखाएको भारतले सहयोग दिने कुरामा गरेको आलटाल भने आलोचित भइरहेको अवस्था छ ।
तर, भारतले यस पटकका लागि मात्रै २ अर्ब १० करोड दिएको छ ।
प्राधिकरण अनुसार प्राप्त उक्त रकम नुवाकोट र गोरखा जिल्लाका ४२ हजार ८६ निजी घरहरुको अनुदान रकमको पहिलो किस्ताका लागि दिइने बतायो ।
प्रतिबद्धता एक खर्बको, कहिले आउँछ बाँकी ?
नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतले एक खर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जसमध्ये ७५ अर्ब सहुलियत ब्याजदरको ऋण र २५ अर्ब अनुदानको हिस्सा हुने भनिएको थियो ।
अनुदानमध्ये १० अर्ब निजी आवास निर्माणमा खर्च हुनेछ भने त्यसमध्ये ७५ अर्ब ऋण आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतीय सरकारको जमानीमा एक्जिम बैंकले नेपाललाई वाषिर्क १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ ।
शनीबार, १२ साउन, ०७५